‘सम्बन्धमा हिसाबकिताब लुकाउनु हुन्न’ - साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
‘सम्बन्धमा हिसाबकिताब लुकाउनु हुन्न’
कार्तिक २७, २०७४-सम्बन्धलाई टिकाइराख्ने तत्त्व के हो ? पतिपत्नीबीच सम्बन्ध सुमधुर राखिराख्ने रसायन के हो ? दर्शकदीर्घाबाट आएको प्रश्नको उत्तरमा मञ्चबाट मदनकृष्ण श्रेष्ठ बोले, ‘हिसाबकिताब सही हुनुपर्‍यो ।’
एक–अर्काबीच माया दर्साउने, राम्रा कुराको प्रशंसा गर्ने, विश्वास कायम राख्ने जस्ता कुराले उनको नजरमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्छ । ‘पतिपत्नीबीच हिसाबकिताब लुकाउनु हुँदैन,’ शनिबार पोखरामा उनले भने, ‘हरिवंश र मेरो सम्बन्ध टिकेको पनि हिसाबकिताब स्पष्ट भएर हो ।’ आत्मकथा ‘महको म’ माथि र्‍यान्डम रिडर्स सोसाइटीले गरेको अन्तक्र्रियामा उनले किताबका कैयौं प्रसंग केलाए । ६ वर्षअघि आत्मकथा लेख्न सुरु गरेको, १५ च्याप्टर लेखिसक्दा श्रीमतीलाई क्यान्सर भएको थाहा पाएपछि २ वर्ष लेख्न रोकेर फेरि सुरु गरेको प्रसंग उनले सुनाए । बैदामको एउटा होटलमा जम्मा भएका पोखरेलीलाई उनले घरी हँसाए, घरी रुवाए । हरिवंशसँगका प्राय: प्रसंगमा भने पोखरेलीले हाँसो थाम्न सकेनन् ।
हरिवंशले ‘चिना हराएको मान्छे’ लेखेको आफूले थाहै नपाएको प्रसंग सुनाउँदा हल हाँसोले गुञ्जायमान भयो । अन्तर्क्रियाका सहजकर्ता दीपेन्द्र श्रेष्ठले मदनकृष्णलाई ‘विद्रोहले जन्माएको कलाकार’ को संज्ञा दिए । र्‍यान्डमले मासिक रूपमा महिनाको अन्तिम शनिबार गर्ने पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रमकै शृंखलाअन्तर्गत कार्यक्रम गरेको अध्यक्ष केशवशरण लामिछानेले जनाए ।
पहिलो तामाङ लेखकको सम्झना ›